तपाईको मोबाइल पानीमा खस्यो भने के, गर्ने के नगर्ने ? कसरी जोगाउने? हेर्नुहोस «
एजेन्सी, अहिले प्राय सबैको हातहातमा मोबाइल अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ। मानिसहरुले कहिलेकाही गल्तीले पनि पानीमा मोबाइल खसाल्ने गर्दछन् वा भनौ वर्षामा पनि झर्न सक्छ। त्यतिबेला सबै जना प्राय आत्तिने गर्दछन की मोबाइललाई कसरी बचाउने ? तर चिन्ता नलिनुस् पानीमा मोबाइल खसे पनि तपाई तत्काल यी उपायहरु अपनाउनुस्..